China Cryogenic mhando yakakwira inoshanda yakachena kuchena senitrogen mweya kupatsanura chirimwa mvura uye oksijeni jenareta vagadziri uye vanotengesa | KANA
Cryogenic mhando yepamusoro inoshanda yakachena kuchena senitrogen mweya kupatsanura chirimwa mvura uye oksijeni jenareta
O2 yakabuda 350m3 / h ± 5%
O2 kuchena ≥99.6% O2
Kumanikidza O2 ~ 0.034MPa (G)
N2 kuburitsa 800m3 / h ± 5%
N2 kuchena ≤10ppmO2
N2 kumanikidza ~ 0.012 MPa (G)
Chigadzirwa chinobuda chinzvimbo (pa0 ℃, 101.325Kpa)
Kutanga kumanikidza 0.65MPa (G)
Kuenderera mberi kwekushanda nguva pakati pemaviri defrosting nguva 12months
Kutanga nguva ~ 24 Maawa
Yakananga kushandiswa kwesimba ~ 0.64kWh / mO2 (kwete inc. O2 compressor)
Mhepo mbishi inouya kubva mumhepo, inoenda kuburikidza nemhepo firita yekubvisa guruva andother mechanical particle uye inopinda isiri-lub yemhepo compressor yekumanikidzwa nematanho maviri compressor kusvika approx. 0.65MPa (g) .Inoenda kuburikidza inotonhorera uye inopinda precooling unit kutonhodzwa kusvika 5 ~ 10 ℃. Inobva yaenda kunoshandura-pamusoro peMS kuchenesa kubviswa kwehunyoro, CO2, kabhoni hydrogen. Anonatsa ane maviri mamorekuru nesefa izere nemidziyo. Imwe irikushandiswa apo anther iri pasi pekuvandudzwa nemarara eitrogen kubva mubhokisi rinotonhora uye kuburikidza nekupisa kweheater.
Mushure mekucheneswa, chikamu chidiki chayo chinoshandiswa sekutakura gasi yekuwedzera turbine, imwe inopinda inotonhorera bhokisi kuti itonhorere neeflux (yakachena okisijeni, yakachena nitrogen uye marara nitrogen) mune huru kupisa exchanger. Chikamu chemweya chakatorwa kubva pakati chepakati peiyo huru kupisa exchanger uye inoenda kune yekuwedzera turbine yekugadzira kutonhora. Mazhinji emweya wakawedzerwa unopfuura nepasecooler iyo inotonhodzwa neoksijeni kubva kumusoro kwekoramu kuti iendeswe kukoramu yepamusoro. Chikamu chidiki chayo chinopfuura nepasipasi kurasa nitrogen pombi yakananga uye inowedzeredzwa kuti ibude mubhokisi rinotonhora. Iyo imwe chikamu chemhepo inoenderera ichitonhodzwa kusvika padyo nemhepo mweya kuyedza kudzikisa chikamu.
Muchikamu chezasi chemhepo, mweya wakakamurwa uye wakadiridzwa senitrogen yemvura uye mweya wemvura. Chikamu chemvura senitrogen yakatorwa kubva kumusoro kwekoramu yepasi. Mhepo inonwiwa mushure mekutonhora uye yakaputirwa inoendeswa kune yepakati chikamu chepamusoro chikamu se reflux.
Chigadzirwa okisijeni chakabviswa kubva muchikamu chezasi chepamusoro chekoramu uye chadzokororwazve nekuwedzera mweya subcooler, chikuru kupisa kupisa. Ipapo inonunurwa kunze kwekoramu. Waste nitrogen inobviswa kubva kumusoro kwechikamu chepamusoro chekoramu uye inogadziriswazve mune inotonhorera uye huru kupisa exchanger kuti ibude mukoramu. Chikamu chayo chinoshandiswa seyakagadziriswazve gasi yeMS kunatsa. Nitrogen yakachena yakabviswa kubva kumusoro kwekoramu yepamusoro uye inogadziriswazve mumhepo yemvura, mvura inonitrogen subcooler uye main exchanger kupisa kuti iburitswe kunze kwekoramu.
Oxygen kunze kwekodhidhiji dombo inomanikidzwa kumutengi.
Pashure: Cryogenic okisijeni chirimwa mutengo mvura okisijeni chirimwa
Zvadaro: Cryogenic mhando mini chiyero chemweya kupatsanura chirimwa maindasitiri okisijeni jenareta nitrogen jenareta argon jenareta
Yakakwira Kubudirira Oxygen jenareta
Yakakwira mhando Nitrogen jenareta